Diyopost.com :: एनसेलको नयाँ ‘ठगी योजना’ : १ लाखको लोभ देखाएर, यसरी लुट्दैछ अर्बौं ! एनसेलको नयाँ ‘ठगी योजना’ : १ लाखको लोभ देखाएर, यसरी लुट्दैछ अर्बौं ! - Diyopost.com
एनसेलको नयाँ ‘ठगी योजना’ : १ लाखको लोभ देखाएर, यसरी लुट्दैछ अर्बौं !
काठमाडौं, २८ भदौ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एक्जिएटाको नेपाल स्थित रहेको एनसेलले गत हप्तादेखि एउटा नयाँ उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
१० हप्तासम्मको लागि ल्याईएको यो ‘स्किममा १ हप्ताभित्र १०० रुपैयाँ भन्दा बढि रिचार्ज गर्ने ग्राहकमध्येबाट १० जनाले १÷१ लाखको दरले पाउनेछन् । १ सय रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा १ लाख रुपैयाँ प्रलोभनमा सामान्य सेवाग्राही नफस्ने त कुरै भएन ।
उनीहरु १ लाख रुपैयाँ पाउने आशामा १ चोटी होईन, दैनिक दशौँ पटक रिचार्ज गर्न पछि पर्दैनन् । यसको मतलब यो हो की, उनीहरुलाई एनसेलले कसरी ठगि रहेको छ भन्ने कुरा पत्तै पाउँदैनन् ।
एनसेलले यस्तो स्किम ल्याएको पहिलो हप्ता नै साँढे ८४ करोडको हाराहारीमा कमाएको देखिन्छ । पहिलो हप्ताको स्किमभित्र ८४ लाख ५२ हजार २ सय १९ जना सेवाग्राहीले रिचार्ज गरेको एनसेलका एक अधिकारीले बताए ।
यसबाट एनसेलले ८४ करोड ५२ लाख २१ हजार ९ सय रुपैयाँ अशुली गरेको देखिन्छ । १ अर्बको हाराहारीमा रकम अशुली गरेको एनसेलले ग्राहकहरुलाई भने १० लाख रुपैयाँ पुरस्कारको रुपमा दिनु कूनै नौलो कुरा भयो र ?
यो हिसाबमा एनसेलले पहिलो हप्तामा नै ८४ करोड ४२ लाख २१ हजार ९ सय रुपैयाँ ब्रम्हलुट गर्न सफल भएका छन् । ‘यसरी उपहार योजनाको नाममा अर्बौं रुपैयाँ ठग्नु कर्पोरेट अपराध हो,’ एक अधिवक्ता भन्छन्,‘एनसेललाई कर्पोरेट क्राइम अन्तगर्त मुद्दा चलाउनुपर्छ ।’
१० हप्तासम्म कत्ति कमाउँछ ?
पहिलो हप्तामा नै साढे ८४ करोड कमाएको एनसेलले १० हप्ताभित्र साढे ८ अर्ब रुपैयाँ ग्राहकबाट अशुली गर्ने देखिन्छ । ग्राहकको संख्यामा अझै बढोत्तरी हुने भएसँगै कारोबार अझै बढ्ने र यसको रुपैयाँ अझै धेरै हुने सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ ।
एनसेलको नयाँ स्किम अनुसार २ करोड ग्राहकमध्येबाट १० महिनामा अरबौँ हैन खरबौँ रुपैयाँ उठाईनेछ र ग्राहकलाई जम्मा १ करोडको ललीपप देखाइनेछ । हुन त राज्यलाई नै ६१ अर्ब भन्दा धेरै लाभांश कर नतिरेर राज्य माथि नै लूट मच्चाइरहेको एनसेलबाट नागरिक लुटिनुको के अर्थ होला र ?
कोड नै नआएको गुनासो !
१ सय रुपैयाँ भन्दा बढि रिचार्ज गर्दा स्किमका लागि रिचार्ज गर्ने ग्राहकले उपहारको लागि एनसेलबाट उपलब्ध हुपर्ने कोड नै नपाएको भेटिएको छ ।
१ लाख रुपैयाँ पाउनका लागि भन्दै ३ सय ५० रुपैयाँ रिचार्ज गर्ने एक सेवाग्राहीले स्किम भित्र पस्ने कोड नं. नै नपाएको गुनासो गरे । कोड नं. को आधारमा बिजेता घोषणा गरिने भएकाले कोड नं. नपाउँदा त्यति धेरै विश्वस्त हुन नसकिएको सेवाग्राहीको तर्क छ ।
एनसेलको फेसबुक पेजमा सार्वजनिक भएको बिज्ञापनमा कमेन्ट गर्नेहरुमध्ये कबिता सिंहले ‘मंगलबार मैले रिचार्ज गर्दा कोड नं. नै पाईन’ भनेका छन् ।
त्यस्तै बिजयले ‘कोड नं. नै आएन हो खास कुरा के हो ?’ भनेका छन् भने लियो पारस मिभारकले ‘रिचार्ज गरेपनि कोड नं. नै नआएपछि कसरी थाहा पाउने हो ? नाटक की साँच्ची हो ?’ भनेर कमेन्ट गरेका छन् ।
प्राधिकरणको अनूमति बिना नै ठगी योजना ?
ग्राहकलाई उपहारको नाममा बेफकुफ बनाइरहेको एनसलले उसको नियमक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भने अनुमति नलिएको पाइएको छ ।
‘एनसेलले जुन स्किम चलाइरहेको छ उक्त स्किम दूर सञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति बेगर चलाइएको छ,’ प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले दियोपोस्टसँग भने,‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा एनसेलको यो मोनोपोली हो । उनीहरुलाई हामी पत्र काट्दैछौँ ।’